Baby Safety Door chimiso
Baby Chigadziko Cover
Hwakagadzwa muna 2015, Ningbo Oicozy zvino yava kuva mumwe kushandiswa nokutengesa uye ekisipota kuti vainyanya kubata akagadzira, musika uye kugadzirwa kuti mwana vakachengeteka zvinhu, nokuti musuo muenzaniso chimiso, pakona mudziviriri, kuchengeteka zvechizarira, uye gedhi kuchengeteka uye zvichingodaro.
Tiri riri Ningbo, China ne yakakunakira zvokufambisa kuwana uye zvose zvezvinhu zvedu zvinoenderana dzakawanda unhu mitemo izvo kuzivikanwa zvikuru pamisika siyana munyika yose. Converging imwe nzvimbo 2000 mativi metres okudhindira, isu zvino tine vashandi pamusoro 80, imwe pagore okutengesa mufananidzo kuti runopfuura USD3, 000.000 uye dziri kwekurasira 90% okuwana yedu pasi pose.
Our vakanyatsoshongedzwa zvivako uye yokuisvonaka masimba munyika Danho zvose okuwana tikwanise hunovimbisa zvachose vatengi kugutsikana. Kunze takagamuchira ISO9001 uye BSCI odhita nokuda kwedu chikamu mugadziri.